Wararka Maanta: Sabti, July 14, 2012-Shariif Xasan Sheekh Aadan oo sheegay in Caasimadda Somalia ee Muqdisho aanay wax gorgortan geli karin
Shariif Xasan oo wariyeyaasha kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ay tahay caasimadda Soomaaliya, ayna ka hadli doonaan xildhibaannada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ay yeelanayso.
"Magaalada Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya mana jirto cid muran gelin karta, laakiin ma ahan in la yiraahdo maxaa dastuurka loogu faahfaahin waayay maqaamka ay yeelanayso, taas waxaa ka hadli doona xildhibananada cusub ee imaanaya," ayuu yiri Shariif Xasan.
Afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadlay dib u dhicii ku yimid shirkii lagu ansixin lahaa dastuurka, isagoo sheegay in cillado farsamo uu dib ugu dhacay, balse dib u dhiciisa uusan sababin khilaaf.
"Waxaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanayaa in la taageeraan geeddi-socodka lagu doonayo in dalka looga saaro KMG-nimada, dhawaan ayuuna furmi doonaan shirka ansixinayo dastuurka," ayuu yiri Shariif Xasan.
Ugu dambeyn, afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya, ayaa sheegay inuu rajo weyn ka qabo in Soomaaliya ay ka baxdo wixii ka dambeeya bisha Ogoosto KMG-nimada ayna u gudubto dowlad joogto ah.
Marka laga yimaado hadalka guddoomiyaha baarlamaanka ee ku aaddan in shirkii ansixinta dastuurka uu u baaqday cilado farsamo oo aan khilaaf ahayn ayay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanku sheegayaan in shirku uu u baaqday khilaaf ka taagan dastuurka.
7/14/2012 7:21 AM EST